Iva akachenjera uvimbe naJehovha (1-12)
Kudza Jehovha nezvinhu zvinokosha (9)
Uchenjeri hunoita kuti pave nemufaro (13-18)
Uchenjeri hunochengetedza (19-26)
Kubata vamwe zvakanaka (27-35)
Itira vamwe zvakanaka pese paunokwanisa (27)
3 Mwanakomana wangu, usakanganwa kudzidzisa kwangu,*Uye mwoyo wako ngauchengete mirayiro yangu, 2 Nekuti zvichakuwedzera mazuva akawandaNemakore eupenyu nerugare.+ 3 Usarega rudo rusingachinji nekutendeka* zvichikusiya.+ Zvisungirire muhuro mako;Zvinyore pahwendefa remwoyo wako;+ 4 Uchabva wawana nyasha uye uchanzi unonyatsonzwisisaPamberi paMwari nevanhu.+ 5 Vimba naJehovha+ nemwoyo wako wese,Urege kuvimba nekunzwisisa* kwako.+ 6 Funga nezvake munzira dzako dzese,+Uye iye acharuramisa makwara ako.+ 7 Usazviona sewakachenjera.+ Itya Jehovha ubve pane zvakaipa. 8 Izvi zvichaporesa muviri wako*Uye zvichasimbisa mapfupa ako. 9 Kudza Jehovha nezvinhu zvako zvinokosha,+Nezvibereko zvako zvekutanga* pazvinhu zvako zvaunowana;+ 10 Matura ako achabva anyatsozara,+Uye munopinda waini yako yasvinwa* muchafashukira newaini itsva. 11 Mwanakomana wangu, usaramba kurayira* kwaJehovha,+Uye usasema kutsiura kwake,+ 12 Nekuti Jehovha anotsiura vaanoda,+Sezvinoita baba kumwanakomana wavanofarira.+ 13 Anofara munhu anowana uchenjeri+Uye munhu anowana ungwaru; 14 Kuhuwana kuri nani pane kuwana sirivha,Uye kuva nahwo* kuri nani pane kuva negoridhe.+ 15 Hunokosha kupfuura matombo ekorari;*Hapana chaunoshuva kuva nacho chingaenzaniswa nahwo. 16 Upenyu hurefu huri muruoko rwahwo rwerudyi;Pfuma nekukudzwa zviri muruoko rwahwo rweruboshwe. 17 Nzira dzahwo dzinofadza,Uye makwara ahwo ese ane rugare.+ 18 Ihwo muti weupenyu kune vaya vanohubata,Uye vaya vanoramba vakahubatisisa vachanzi vanofara.+ 19 Jehovha akasika nyika neuchenjeri.+ Akamisa denga zvakasimba neungwaru.+ 20 Neruzivo rwake mvura yakadzika yakakamurwaUye denga rine makore rakadonhedza dova.+ 21 Mwanakomana wangu, usabvisa pfungwa dzako pazviri.* Chengetedza uchenjeri hunobatsira uye gara uchishandisa pfungwa; 22 Zvichakupa* upenyu,Zvova chishongo chemuhuro mako; 23 Uchabva wafamba panzira yako wakachengeteka,Uye tsoka yako haizogumburwi.*+ 24 Paunorara, unenge usina chekutya;+Ucharara, uye uchanakirwa nehope.+ 25 Hauzotyi chero chinhu chinotyisa chinouya usingafungiri+Kana dutu riri kuuya pane vakaipa.+ 26 Nekuti uchakwanisa kunyatsovimba naJehovha;+Achaita kuti tsoka yako isabatwa.+ 27 Usarega kuitira zvakanaka vaya vanoda kubatsirwa+Kana uchikwanisa* kubatsira.+ 28 Usati kumuvakidzani wako, “Chimboenda wozodzoka! Ndichakupa mangwana,” Iwe uchigona kumupa iye zvino. 29 Usarongera muvakidzani wako zvakaipa+Iye achigara newe achifunga kuti akachengeteka. 30 Usapopotedzana nemunhu pasina chikonzero,+Kana pasina chakaipa chaakuitira.+ 31 Usachiva munhu anoita zvemhirizhonga+Kana kusarudza imwe yenzira dzake, 32 Nekuti Jehovha anosema munhu anonyengera,+Asi ishamwari yepedyo yevakarurama.+ 33 Kutuka kwaJehovha kuri paimba yemunhu akaipa,+Asi anokomborera musha weakarurama.+ 34 Nekuti anonyomba vaya vanotsvinya,+Asi anofarira vanyoro.+ 35 Vakachenjera vachawana nhaka yekukudzwa,Asi mapenzi anorumbidza kusakudzwa.+
^ Kana kuti “kusendama pakunzwisisa.”
^ ChiHeb., “guvhu rako.”
^ Kana kuti “Nezvakanakisisa.”
^ Kana kuti “muzvisviniro zvako.”
^ Kana kuti “kuranga.”
^ Kana kuti “kuva nahwo semubereko.”
^ Zvinoratidza sekuti pari kurehwa zvataurwa mundima dzapfuura nezvaMwari.
^ Kana kuti “Zvichapa mweya wako.”
^ Kana kuti “haizoroveri pane chimwe chinhu.”
^ Kana kuti “Kana zviri musimba reruoko rwako.”